“Anaafi namni yataamaa guddise Jannata kheeysatti akka lameen tanaati” - NuuralHudaa
“Anaafi namni yataamaa guddise Jannata kheeysatti akka lameen tanaati”
Rasuulli salallaahu aleeyhi wasallam akkana je’e:
“Anaafi namni yataamaa (ilmaan abbaan irraa du’e) guddise Jannata kheeysatti akka lameen tanaati” je’e quba isaa walitti maxxansee.
Rasuulli salallaahu aleeyhi wasallam hadiisa kana kheeysatti nama yataamaaf if qabee wajjiin Jannata kheeysatti xiqquma wal caalla jechuu isaati. Kuni sadarkaa guddaadha.
Duuba biyya teenya kheeysatti yataamaan (ilmaan abbaan irraa du’e) hedduudha; kan dhukkubaan du’eefi kan mootummaan ajjeesaa jirus heddu.
Ilmaan yataamaa tahan kanaaf namni if qabe Jannata kheeysatti sadarkaa guddoo qaba. Iida ilmaan kheenya quufanii ilmaan yataamaa beelaan dabarsuu hin qaban. Ud’hiyaan miskiina hunda quubsuu qabdi. Ilmaan kheenya daara baafnee ilmaan abbaan irraa ajjeefame akka hin daarre if qabuufii qabna.
Guyyaan Iidaa guyyaa ijoollee yataamaa gammachiisuun dabarsinu haa tahu. Sadarkaan yataamaa guddisuu Rasuula ﷺtti eega nu dhiheeysitee, wanni sanirra caalu maaltu hafe?! Guddisuu dadhabnu guyyaa Iidaa takkattii tanallee taatu waan qabnu waliin haa nyaannu, haa daara baafnu, haa gammachiifnu.
Akkasumas Miskiinoota harka qalleeyyii, hidhamtootaafi maatii isaanii ziyaaruun, waan qabnu waliin hirachuun gammachiisuun waan muslima hundarraa eeggamu. Hundi keenyaahuu waan qabnuun miskiinootaafii yatiimoota haa yaadannuun dhaamsa keenya ka arraati.
October 24, 2021 sa;aa 7:05 pm Update tahe